Fiteny melaneziana - Wikipedia
Ny fiteny melaneziana dia ireo fiteny ampiasain' ny teratany melaneziana, izay tsy mamorona vondrom-piteny misy ifandraisany fa fiteny amin' ny fianakaviam-piteny samihafa. Ny fitenenana hoe fiteny melaneziana dia efa tsy ampiasain' ny mpahay teny intsony noho izany antony izany. Nenti-nanondro ny fiteny aostrôneziana ampiasain' ny Melaneziana anefa ny hoe fiteny melaneziana, dia fiteny ao amin' ny fiteny ôseaniana, ny fiteny malaiô-pôlineziana atsinanana na malaiô-pôlineziana afovoany-atsinanana tsy idiran' ny fiteny pôlineziana sy ny fiteny mikrôneziana. Tamin' ny manodidina ny taona 1970 dia nosokajina ho isan' ny fiteny malaiô-pôlineziana atsinanana ireo fiteny melaneziana (isan' izany ny fiteny fijiana) sy ireo fiteny mikrôneziana ary ireo fiteny pôlineziana.
Ankehitriny dia fantatra fa ny fiteny melaneziana dia tsy misy fatoram-pihavanana: fiteny mifanakaiky fianakaviana izy ireo na mety ho tsy iray fianakaviana akory; lasa fomba fiteny fotsiny ihany ny hoe fiteny melaneziana, toy ny fampiasana ny hoe fiteny papoa.
Fiteny ao MelaneziaHanova
Ny ankamaroan' ireo lazaina hoe fiteny ao Melanezia dia isan' ny fianakaviam-piteny aostôneziana na isan' ny iray amin' ireo fianakaviam-piteny papoa. Misy fiteny 1 319 ny ao Melanezia, izay miparitaka amin' ny faritra kely. Ny salan-kakitroky ny fiteny isaky ny kilômetatra dia 716, ka hakitroka lehibe indrindra izany maneran-tany, saika in-telo makitroka noho ny ao Nizeria, izay malaza amin' ny fivangongon' ny fiteny maro amin' ny faritra iray. Akoatr' ireo fiteny teratany dia ao koa ireo fiteny pijiny sy kreôly, ka ny tena fantatra dia ny fiteny tok pisin, ny fiteny hiri motu, ny fiteny pijinin' ny nosy Salomon, ny fiteny bichlamar ary ny fiteny papoa maley.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiteny_melaneziana&oldid=1037969"
Dernière modification le 18 Septambra 2021, à 04:56
Voaova farany tamin'ny 18 Septambra 2021 amin'ny 04:56 ity pejy ity.